ikhaya » Iimpawu zoLondolozo:
Archives Tag: ingcaciso
I-Ciaran Doran ijoyina iPixel Power
I-IBC 2016, Yima 7.A31: I-Pixel Power inyule iCiaran Doran kwindima entsha ye-vice-wongameli we-sales of international and marketing. Ukukhokela ulawulo olutsha kwi-IP kunye neefowuni ezenziweyo zokubonisa ukuqwalasela i-Doran yamandla omtsha kwinkampani njengoko ibeka ngokwazo njengenkokeli emhlabeni jikelele wokudlala kunye nokuzenzekelayo. Ngerekhodi yomculo ...
I-Pixel Power inika umxholo we-IBCTV
IBC 2016, Yima 7.A31: Amandla ePixel, umthengisi omtsha wemifanekiso yokupapasha, i-playout kunye nezisombululo ezenziwe ngokuzenzekelayo, unikezela zombini amandla omfanekiso kunye noyilo loyilo lwe-IBCTV yalo nyaka, inkonzo entsha enokubakho kwi-intanethi ebalulekileyo kwi-event ye-broadcast Kunyaka. I-IBCTV yiyure ye-24 isebenza ngokusasazekayo, iveliswe kwisayithi ngethuba lokubonisa ...
Amandla wePixel - kuphela yinyani, esebenza ngokugcweleyo edlalwa ifu kwiBC2016
IBC 2016, Yima 7.A31: I-Pixel Power iya kugqiba isikhundla sayo kwi-IBC2016 njengomniki-wokunikezela ngokusebenza ngokugcwele, osebenzayo, odlala ngokukhawuleza kwideshi efini. I-StreamMaster ihambisa umsebenzi ocebileyo okulindelwe ngamashaneli e-premium, apho udlala ngokukhawuleza kwendlela yokudlala kunye nokukwazi ukulungele ukusebenza kwiishedyuli. Ukulandela ukuqaliswa kwe-StreamMaster ngaphambili kwe-2016, i-Pixel Power iye ...
I-Pixel Power ibhiyozela ubudlelwane kunye ne-VisionTops
I-Booth 5E4-06, i-Asia ye-Broadcast 2016: I-Pixel Power, i-automation, i-branding ne-graphics entsha, inandipha ubudlelwane obusondeleyo kunye noBeijing VisionTops Technology. I-Chinese integrator system kunye nedumela lomhlaba ngoku liquka rhoqo iinkcukacha zeCityity 3D ezivela kwiPixel Power kwizivumelwano zayo ezinkulu. "NgePixel Power siyazi ukuba asiyi kufumana nje umgangatho ophezulu wesigcawu kodwa ...
I-Pixel Power inika iifayile ezisemthethweni zokusasaza ukudlala kunye nemisebenzi yokusebenza kwi-Broadcast Asia 2016
I-shishini liye lafikelela kwindawo yokugxotha apho abaniki bezonxibelelwano baqonda ukugcinwa kweendleko ezinkulu kunye neenzuzo zokusebenza zokufudukela kwi-IP kunye neenkqubo ezichazwe kwesoftware, "kusho uJames Gilbert, i-CEO yePixel Power. "Sinako ukubonisa izisombululo yokwenene, zokusebenza unako ukusebenza namhlanje." Njengokuba ubungqina oku, kwi mboniso yakutshanje NAB e Las Vegas, Pixel Power wabaleka ...
I-Telefónica ithengisa kwiPixel Power nje ngokuba ngumthengisi wemifanekiso ukuphatha iziphumo ezininzi zokuphila
I-Cambridge, i-UK, i-22 ngoFebruwari i-2016: Amandla wePixel, i-Automation, branding kunye ne-graphics innovator, idale inkonzo enomxholo obenokuthi ikhutshwe kude, kumniki-mpahla waseSpain u-Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA). Inkqubo yenzelwe iphinde iphunyezwe ngu-Pixel Power's distributor eSpanish, Qinmedia. Inkqubo entsha incike kwiidivaysi ezimbini zePrixel Power LogoVision 3D, kunye kunye ...
I-Pixel Power iyakwenza i-IDV2 identi
I-Pixel Power, umthengisi omtsha wemifanekiso yokusasazwa kunye nezisombululo ezenziwe ngokuzenzekelayo, unikezele i-hardware kunye ne-software ye-ITV, isistim se-UK esesikhundleni sokusasaza ngezorhwebo, ukudala ubunikazi obutsha bokutshatyalaliswa kwe-ITV2. Ukubukeka okungakaze kubonwe ngaphambili kubangela izikhala ezingahleliwe eziqhubekayo zitshintsha, ukuhamba okuxhomekeke kumsebenzi oyingqamleko wePixel Power Clarity. I-ITV ifake iCityity 3D ...
I-Pixel Power inikezele imifanekiso emihle ye-UK eya kwiipolon
I-Pixel Power isekela ababini abasasazwayo abazimeleyo be-UK, i-STV eScotland kunye ne-UTV eNyakatho ye-Ireland, ukuzisa iziphumo zonyulo jikelele ze-UK kwisikrini. Iqela leNkonzo yeClass kwiPielel Power linikeze iifayile zemizobo kunye neenkcukacha ze-bespoke kwiinkqubo zabo zeenkcukacha ukuqinisekisa ukuba iziphumo zakutshanje ezivela kummandla ngamnye zisesikrinini ...
I-Pixel Power brand ijelo elitsha e-Ireland - UTV Ireland ukunyusa ukusetshenziswa kwayo kweBrandMaster
I-Pixel Power, umthengisi omtsha wemifanekiso yokusasazwa kunye nezisombululo zokudlala, kukunika abaguquleli ababini beBrandMaster kwi-UTV eBelfast, kwiCandelo loLwazi loSasazo. U-UTV sele usebenzisa i-BrandMasters kunye nezinye iinkqubo zegrafu zamandla zePixel kwiinkonzo zayo ezikhoyo eNyakatho ye-Ireland njengenxalenye ye-network ITV, kwaye ithwala iplani yekhnoloji efanayo ngaphezu kwayo ...
I-Pixel Factory yenza iigrafti ezizimeleyo kunye ne-media assembly
Umkhiqizo weSofthiwe udibanisa ukuhamba komsebenzi kunye nezixhobo eziyimifanekiso yokuqhelanisa imisebenzi ephindaphindiweyo yokukhangela uphawu, ukuguqulela kunye nokwakhiwa kwendawo yePixel Power iqokelele ukusetyenziswa kweprogram ye-injini yayo yangempela ye-injini Ukuchaneka kunye nesisombululo sayo sokuhambisa umsebenzi waseGallium ukudala iifayile ezimanyeneyo kunye ne-media assembly system yefayile- ziseko. Le nkqubo entsha, i-Pixel Factory, ivelisa ngokuzenzekelayo isiqulatho esifana neyohlukeneyo ...